तिमीलाई मैले के भन्या छु र ? मोहन आचार्य ´´जलद´´ तिमीलाई मैले के भन्या छु र ? किन रिसायेकी ?
जिन्दगी तिम्रो सुन्दर संझेर हेर्दा किन हरायेकी ?
आँखाको नानी सरी छ माया किन लजाएकी ?
अमूल्य जीवन दिएकै थिएँ म किन रिसाएकी ?
यो झुट्टो संसार सम्झेर फेरी किन लोभिएकी ?
नारीकोरुपमा सौन्दर्य बोकेर किन पोखियेकी ?
मिलनको मुस्कान बोकेर आज किन मात्तिएकी
म तिम्रो प्रेमी थाहा हुदा हुदै किन आत्तिएकी ?
सुन्दर छ संसार जहाँ तिमीछ्यौ किन डराएकी ?
छ तिम्रो प्रेमी बिस्वास छ भने किन कराएकी ?
´´जलद´´को संसारमा कोहि हुन्न ? किन कुराएकी?
आफैले लेखि प्रेमको कथा त्यो किन पुरायेकी?
जब सम्बन्ध हाम्रो रहला धर्तीको किन सुनाएकी ?
मारेर जानु त छदैछ हासेर बाँच किन बुझाएकी ?
मोहन आचार्य ´´जलद ´´
साहित्यिक नाम इन्द्रेणी शर्मा
प्रगतिनगर ,नवलपुर नवलपरासी लुम्बिनी नेपाल
दिनांक १ अगष्ट २०१२ लिस्बोन/ बिहान८.४० /
www.jaladacharyawordpress.com.Posted on : August 3, 2012, 5:20 pmSource : First 2345... LAST Archieve Literature Headlines थप शिर्षकहरु ::कविता/गीत/गजल/हाइकु •»छाडी जाने आमा- रश्मी रानाभाट •»छाती दुख्दा छामी हेरें (गजल)- Calpana Rai•»सुनको गजुर (गजल)- सावारा योङ्हाङ •»पलपल तिमीलाई माया गर्ने - अज्ञात पाल्पाली•»न अमेरिकन भए न नेपाली भए- इन्जिनियर राकेश कार्की•»धर्तीमा खुशी [गजल]- कल्पना राई"खुशी"